I-GvSIG 2, ukubonakala kokuqala - ama-Geofumadas
I-GvSIG 2, ukuqala kokuqala
Novemba, 2008 I-GvSIG
Esikhathini senkathi sinqume ukuhlola inguqulo entsha ye-GvSIG, okuyinto nakuba ingakashicilelwa okwamanje, kungenzeka ukulandwa ukwakha okuhlukile ukubona ukuthi yini ukuguga.
Ngilande i-1214, futhi nakuba ngilindele ukuhlola ukusebenza kwama-symbol of amaphuzu nemigqa efana Ngangisho xurxo, ngokusobala ngizozama i-1218. Nazi ukuqala kokuqala:
Ngokuqinisekile, kwakuyisikhathi sokuthuthukisa isithombe sezithombe esasiyi-caveman.
I-2. Amabha yamathuluzi
Manje kungenzeka ukukhombisa noma ukufihla amabha yamathuluzi, okubonakala ukuthi esikhundleni sokuba izandiso ezivulekile nazo zinezigaba zeqembu. Lezi zingabonakala njengezinketho uma zifakiwe.
Ezinye izenzo ziye zahlanganiswa kwimenyu ephezulu lapho zingasetshenziswa khona kuzendlalelo ezithile.
(Usizo) Nakuba kungabonakali njenge-chm, usizo lunalolokubonakala futhi lungatholakala ngaphandle kokuphequlula umqulu we-PDF
(KML) Manje uma ulayisha isendlalelo, ngaphezu kwe-gml, shp, dwg, dgn futhi i-raster enye yokulayisha i-kml yengezwe, nakuba ngingaboni ukuthi kungenzeka ukuthekelisa kule fomethi.
(Ukwakhiwa) Iminye imithetho emisha yokwakha ifakiwe, njenge-spline kanye ne-array. Futhi manje kungenzeka ukubona imiyalo ukuthi isandiso sakhe asisebenzisanga njengokuqhumisa, ukujoyina, ukuphuka, ukusula kanye nalawo angaphakathi kwenguqulo yangaphambilini ngaphandle kokuthi ube nezandiso futhi uwasebenze ... ngeke wazi ukuthi zikhona.
(Ukubukela kude) Ngaphandle kokuthuthukiswa kokusebenza komcibisholo we-raster, kusetshenzwe imisebenzi eminingi yokusebenza ngezithombe, kufaka phakathi ukuhlukaniswa, ukubalwa kwamabhande, incazelo yezifunda ezithakazelisayo namaphrofayela wesithombe.
(I-Topology) Nakuba lesi sandiso singatholakali kuphela inguqulo ye-2, sizame futhi empeleni, kungenzeka ukuguqula isimo se-archaic sibe yi-topology ngokucacile, imithetho kanye nenani elincane lamaphutha abamukelekile.
UNkulunkulu kuphela owaziyo, mhlawumbe izinsuku zangeviki ezizayo zisho uma zilindele ukukhipha inguquko.
DGN DWG I-GvSIG OS KML shp
Thumela Previous«Langaphambilini Inkambo ye-GIS ejwayelekile ezinsukwini ze-2
Post Next Novemba kwaba isifinyezo ngenyangaOlandelayo "
Izimpendulo ze-2 ku "GvSIG 2, ukuqala kokuqala"
Disemba, i-2008 ku
Angizange ngizwe ukuthuthukiswa okuningi kule ndaba, ngokuqinisekile amantombazane e-Geomatic blog kufanele azi okwengeziwe
Mario Martinez uthi:
Sawubona abakhi beCartesia, emsebenzini, ngaphezu kokusebenzisa i-Arcgis (sinamalayisense ambalwa kakhulu (uzokucabanga ukuthi abaluleke ngani), sisebenzisa futhi i-GVsig ngemisebenzi emincane. Umbuzo wami uthi uma ngabe wazi ukuthi yikuphi okukhishwe yi-2 isithombe, ngoba engikusebenzisayo kunesilinganiso, uma kufikwa ekwetuleni nasekubekeni amasu "amahle" amabi impela ...?